Mourinho: Messi iyo Ronaldo waxay ka yimaadeen Aduun kale. - Caasimada Online
Home Warar Mourinho: Messi iyo Ronaldo waxay ka yimaadeen Aduun kale.
Mourinho: Messi iyo Ronaldo waxay ka yimaadeen Aduun kale.
Tababaraha kooxda Real Madrid Jose Mourinho ayaa amaanay labada xidig Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ka dib markii ay Los Blancos barbaro 2-2 ah la dhaafi weysay kooxda Barcelona, kulankii El Clasico.
Tababaraha reer Portugal ayaan go’aamin horyaalka inkastoo ah ku dhow yihiin inay lumiyaan, laakiin Mou ayaa amaanay bandhiga labada xidig isagoo sheegay in aduunka oo dhan ay ku raaxeysteen aab ciyaareedkooda.
“Messi iyo Ronaldo waxay ka yimaadeen caalam kale. Waxaan doonayaa inuu ciyaaryahankeygu guuleysato, balse labadoodu waxay ahaayeen Fantastik,” ayuu yiri Mourinho.
“Aniga Tababare ahaan, waan ku raaxeystay kulanka. Waxay aheyd ciyaar fiican natiijadaani ma go’aanmineyso ilaa maalinta ugu damebeysa. Sidoo kale qof walba ayaa ku raaxeystay ciyaarta.”
Mourinho ayaa sidoo kale amaan kala dul dhacay bandhiga Mesut Ozil wuxuuna u sheegay saxaafada: “Ozil ayaa nasiiyey awood wuxuuna muujiyey ciyaar wanaag.”
Barcelona ayaa horyaalka ku hugaamineysa haatan sedax dhibcood, laakiin waxay kooxda ay xafiiltamaan u jirtaa sideed dhibcood iyadoona ay Madrid fadhiso booska shanaad ka dib todobo kualn oo ay ciyaartay.